Qori tuur loo sameynayo ardeyda iskuulada safafka ugu jira - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay torsdag 20 april kl 09.29
Fikrado lagu tayeynayo iskuulada dalkaan oo la soo bandhigey
Caruur waxbarasho ku jirta. sawir: JESSICA GOW / TT
Kuwa qori tuurkaas ku guuleystaana ay boosas ka helaan iskuuladaas safafka loo gali jirey.
Jan-Erik Gustafsson waa madaxa guddiga farsamo ee mustaqbalka iskuulada dalkaan Sweden , wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
-Marka ay timaado safafka loo galo iskuulada madaxabanaan, waxaanu soo jeediney in la joojiyo safafka ay ardeydaasi iskuuladaas u galaan taas badalkeedana qori tuur ardeydaas loo sameeyo, ayuu yiri Jan-Erik Gustafsson oo ah madaxa guddiga farsamo ee mustaqbalka iskuulada dalkaan Sweden.
Maanta ayuu guddigaas farsamadu warbixintiisa soo bandhigey, gacantana u galiyey wasiirada dawladda iyo qeybeheeda dalkaan u qaabilsan dhanka waxbarashada iyo iskuulada.
Qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka dalkaan Sweden ayaa dhaliiley qorshahaan ay soo jeediyeen guddiga farsamo ee mustaqbalka iskuulada Sweden.
Jan Bjärklund hogaamiyaha xisbiga Libaraalka ayaa wuxuu yiri sidan soo socota:
-Waa wax laga niyad jabo soo jeedimahaan uu guddigu soo bandhigey, soo jeedimahooduna ma xanbaarsana wax qabad dhab ah oo la taaban karo, waxaanuna u baahanahay in mushaarada macalimiinta la sii kordhiyo, in fasalada iskuuladeena edeb ahaan iyo akhlaaq ahaanba la xakameeyo, in la sameeyo nidaam shahaadooyin loogu soo rogo iskuulada, ayuu yiri Jan Bjärklund hogaamiyaha xisbiga Libaraalka.
Waxyaalaha guddigaasi soo jeediyeyna waxaa ka mid ah in la kordhiyo miisaaniyadda iyo kharashaadka ku baxa iskuulada ku yaala xaafadaha dafaha ah ee ay ku badan yihiin dadka soo galootiga asalkoodu yahay.
Guddigaan farsamo ee loo igmadey in ay ka soo talabixiyaan mustaqbalka iskuulada dalkaan Sweden ayaa hawshaas waxaa loo xilsaarey sanadkii 2015-kii.
Qodobada ugu muhiimsan ee uu guddigaan farsamadu soo bandhigeen si loo sii horumariyo tayada iskuulada dalkaan Sweden ayaa waxaa ka mid ah:
- In la qaado talaabooyin heer qaran ah oo lagu xoojinayo tayada waxbarasho ee iskuulada.
- In si firfircoon qaranka dalkaani kor ugu qaado tayeynta maamulada waxbarasho ee heer gobol , wadashaqeyn joogta ahna lala yeesho, sidoo kalana danagal joogta ah oo shaqooyinkooda la xiriirta lagu sameeyo.
- In kor loo qaado tayada waxbarasho ee ardeyda macalimiinta loo tababarayo sidoo kalana xoogga la saaro sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo waxbarashada macalimiinta hadda wax ka dhiga iskuulada dalkaan Sweden.
- In la tayeeyo caafimaadka ardeyda iskuulada dhigata.
- In la tayeeyo dib u habeyn joogta ahna lagu sameeyo manhajka iskuulada.
- In kor loo qaado dhimista faquuqa ka jira iskuulada dalkaan Sweden
- In la baabi’iyo safka ardeydu u galaan iskuulada ay rabaan in ay dhigtaan taas badalkeedana lagu badalo in loo qori turo oo ardeygii qori tuurkaas ku guuleystaa boos ka helo iskuuladaas, waxayna guudigu qataan in qori tuurkaasi uu horseedi karo in iskuuladaas ay dhigtaan ardey isku dhaf ah.
- Guddiga ayaa sidoo kale soo jeediyey in dawladda dalkaani ay lacag dheeraad ah oo dhan 6 miljaarder oo karoon u qoondeyso saddexda sano ee soo socota maalgalinta tayeynta waxbarashada iskuulada dalkaan taas oo lacagtaas la marsiin doono maamulada waxbarasho ee heer degmo.